Tele RELAY တစ်ခု - မော်ကွန်းတိုက်ဖော်ပြ
အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်ကစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်
နယူးဒေလီ။ ။ အစိုးရသည် ၄၈ နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုမလေးရှားဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည့် Media One နှင့် Asianet News တွင်ပိတ်ပင်ထားမှုကို ၄၈ နာရီအတွင်းဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ဆီနီဂေါ - မာလီ: Khalifa Sall သည် Bamako ၏မြို့တော်ဝန် - Jeune Afrique အားသွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြသည်
Tele RELAY တစ်ခု4ပင်လယ်, 2020 0
Khalifa Sall နှင့် Adama Sangaré။ © JA အဘို့အ Vincent Fournier ယခင် Dakar မြို့တော်ဝန်သည်မြို့တော်ဝန် Adama Sangaréသို့အကျဉ်းထောင်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။...
12:30 pm မှာသတင်း - Benjamin Griveaux စွန့်ခွာ: oudouard Philippe ကသူ၏ဖော်ပြ ...
Le Havre မှစည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ကြီးချုပ်အက်ဒွပ်ဖိလစ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်ပဲရစ်မြို့တော်ဝန်၏ဘင်ဂျမင် Griveaux အားရာထူးမှရုပ်သိမ်းခြင်းအပေါ်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - ဒုတိယသမ္မတသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောလူ ဦး ရေနှင့်ယင်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးဒေလီ။ ။ သောကြာနေ့တွင်ဒုသမ္မတ Venkaya Naidu ကနိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်ပြhasနာများဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပြdiscussနာကိုဆွေးနွေးရန်တွန့်ဆုတ်နေခြင်းကြောင့် ၀ မ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - CBI နှင့် CBI: တရားရုံးမှ CBI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးဒေလီ။ ။ အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည့် CBI ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားနယူးဒေလီတရားရုံးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ တရားခံများအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုများပြားသနည်း။
Granny DJ Arafat ကသူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြပြီးအပိုင်း ၁ - ဗီဒီယိုကိုတောင်းပန်သည်
#Mom #DJ_Arafat # မကျေနပ်မှုကိုဖော်ပြပြီး #excuse အပိုင်း ၁ ။ 🔔 Subscribe! Max ဝေမျှခြင်း ined #ineditwebtv #webtv #ineditBuzz YOUTUBE: ဒီမှာနှိပ်ပါ။ bit.ly/1voElaW FACEBOOK: ၁၀ ကြိမ် + ပုံရိပ်များ / ဗီဒီယိုအသစ်များ၊
အိန္ဒိယ - နိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် EC အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြသည်
နယူးဒေလီ။ ။ စနေနေ့အမျိုးသားမဲဆန္ဒရှင်များနေ့၌တက်ရောက်သူများအား ၀ န်ကြီးချုပ်နာရင်းဒရာမိုဒီကတိုင်းပြည်အနေဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - NCPCR အကြီးအကဲဟောင်း CDS Rawat ၏မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
နယူးဒေလီ။ ။ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူနှင့်ပထမဆုံးကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးသားကော်မရှင်လူ့အခွင့်အရေးဥက္ကဌ Shanta Sinha က ၀ န်ထမ်းချုပ်၏ကြေငြာချက်အပေါ်သူအလွန်လေးလေးနက်နက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - ၀ န်ကြီးချုပ်မိုဒီကကန်နာယုလမ်းမတော်တဆမှုတွင်သေဆုံးမှုအတွက် ၀ မ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 11, 2020 0
နယူးဒေလီ။ ။ သောကြာနေ့ညနေပိုင်းက Kannauj တွင်ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်ခရီးသည်များသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi က ၀ မ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏စကားကို ...